Home Arimaha Bulshada Guurka: Talooyin muhiim ah oo loo soo jeediyay dadka isguursanaya
Shuruudaha dhaqaale ama caadooyinka ay dadku ilaaliyaan ayaa la aamisan yahay inay sababaan hoos-u-dhaca guurka. Waa dood muddo dheer taagan, meelo badanna laga yaabo in ay tahay caqabad ku hor-gudban mustaqbalka dhallinyarada guurdoonka ah ee ku hamminaya inay reero dhistaan.
Waxaa jira hindise ay dhowaan soo bandhigtay Jaamacadda Islaamiga ah ee Azhar ee xarunteeda ay tahay dalka Masar.
Akameemiyada Cilmi-baarista Islaamka ee Jaamacadda Al-Azhar ayaa ku talisay in la dhimo kharashka ku baxa aroosyada, sida sawirro-gelista iyo bisha malabka. Arrintaas waxay keentay hadal-heyn badan oo warbaahinta bulshada ah.
Hindisaha guurka ee Al-Azhar
Hindisaha ay soo bandhigay Azhar waxaa ujeeddadiisa lagu sheegay in “lagu ciribtiro caadooyinka xun-xun iyo dhaqamada guurka”, iyadoo la rajaynayo in wax la fududeeyo, lagana hortago buunbuuninta iyo kharashka badan ee la galo, gaar ahaan xilligan oo xaaladda dhaqaale ee dunida ay aad u liidato.
Wuxuu hindisuhu ka kooban yahay dhowr weji. Tan ugu horreysa waa xafladda meherka, oo la doonayo in lagu koobo arrimaha ugu muhiimsan sida: “In la akhriyo Suurat Al-Faatixa iyo in lagu casuumo oo keliya qaraabada ugu dhow ama xubnaha qoysaska labada dhinac ama in ay meesha tagaan oo keliya labada is guursaneysa iyo waalidka.
Marxaladda labaad ee talada ay saameyneyso waa isu-diyaarinta guurka: “Koorso degdeg ah oo loogu talagalay lammaanaha isqaba oo arrimaha qoyska ah, in lagu heshiiyo qiimaha dahabka ee markaas, balse aan lagu saleyn garaam.”
Halka marxaladda saddexaad ay tahay habraacyada guurka oo ay ku jiraan in aan lacag lagu bixin sawirro la galo, bisha malabka in meesha laga saaro, iyo in laga maarmo labbiska waalidka labada dhinac.
Sidee baa arrintan looga falceliyay baraha bulshada?
Hindisahan ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay baraha bulshada ee dalka Masar.
Qaar ayaa ka sheekeeyay waaya-aragnimadooda iyagoo xusaya codsiyo lagu xujeeyay oo ay ku tilmaameen ‘buunbuunin lagu doonayay in lagu dhammeeyo guurka’, kaas oo noqday “qayb muhiim ah oo ka mid ah caadooyinka qoysaska Masar qaarkood,” sida ay tilmaameen.
Qaar kale ayaa bogaadiyay hindisaha Al-Azhar, iyagoo ku tilmaamay mid qiimo leh, ixtiraam leh oo ay tahay in la dhiirrigeliyo.
Haweenay guurka u diiday arrin la yaab leh
Qaar waxay diiradda saareen soo-jeedinta la xiriirta in “lammaanaha la siiyo koorsada degdegga ah ee arrimaha qoyska” oo lagu daray marxaladda labaad, iyadoo la tixgelinayo in maqnaanshaheeda “ay tahay sababta ugu weyn ee dhibaatooyinka la wajaho guurka kaddib.”
Dhanka kale, qaar ayaa aaminsan in Al-Azhar aysan keenin wax cusub, iyo in shuruudaha hindisaha “ay noqdaan kuwo ay tahay in ay aqbalaan dhinacyada ay khuseeyaan.”
Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka jawaabay soo-jeedintan ayaa sheegay in dadka badankiis ay ku dhaqmaan waxa ay diintu fartay.
Dadka aragtiyada ka dhiibtay qaar ayaa Al-Azhar waydiiyay qaabka ay u adeegsan doonto hirgelinta hindisahan iyo in “Akadamiyadda Cilmi-baarista Islaamku ay wajihi doonto xaqiiqada dhabta ah ee dadka, ayna ku boorriso imaamyada iyo bareyaasha jaamacadda in ay sidaas sameeyaan?”
Sidoo kale, qaar ayaa ku taliyay in la sameeyo hindise lagu “ilaaliyo sharafta iyo xuquuqda xaaska furriinka kaddib, maaddaama ay xuquuqdeeda uga tanaasuleyso si ay u fududeyso guurka.”
Koox kale ayaa u arkaysay in hindisahan uu yahay mid qurux badan, balse waxa ay la-yaab ka muujiyeen sababta “dhaqaalaha awqaafta ee aan shaqayn ee boqollaalka sano jiray loo isticmaali waayay si dhallinyarada loogu guuriyo ama in la siiyo deyn wanaagsan.”
Previous articleChristian Eriksen Oo Ka Jawaabay Dalabka Ay Man United Ka Gudbisay Saxiixiisa
Next articleAbaarta Soomaaliya: “Wiilkeyga waddada ayaan kusii aasay gabadheydana meeshii aan tagay”